I-Radar yoLuntu idibanisa neNuSuite's SuiteCloud | Martech Zone
I-Radar yoLuntu idibanisa neNuSuite's SuiteCloud
NgoLwesihlanu, Meyi 18, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Infegy yeNtlalo yeRadar idityaniswe neNetSuite kwisisombululo esidibeneyo esibizwa ngokuba I-Radar SuiteApp yeNtlalontle yeNetSuite's SuiteCloud yeComputer Platform.
Umdibaniso wandisa iSuiteAnalytics yeqonga ngohlalutyo olusekwe kwindima yokuhamba kwembali ezingxoxweni, isabelo selizwi, abaphambili abaphambili, ingqiqo yokhuphiswano, Uhlalutyo lweemvakalelo, izihloko, kunye neendidi zomdla kunye nabantu. Iinkampani zinokuthi emva koko zisebenzise olu lwazi ukwakha iimveliso ezingcono, iinkonzo ezilungiselelwe, kunye nemikhankaso emihle yokuhlangabezana neminqweno ethile yabaphulaphuli abajolise kubo, konke ngaphakathi kweqonga elidityanisiweyo leNetSuite.
I-Radar yeNtlalontle yenzelwe ukunyusa i-suite yolawulo lweshishini olusekwe kwilifu ngokuhlangeneyo ukuze ifumane ulwazi olukhawulezileyo, ukuya kumzuzu ngokuqonda kwabathengi kunye nokwenza ngcono ukusebenza kweshishini ngolu hlobo lulandelayo:
Amaqela entengiso kunye nentengiso anokubeka iliso kwiwebhu yoluntu ukuze bafunde ukuba bathini abathengi malunga neemveliso zabo kunye nokhuphiswano.
Ngokukhawuleza chonga izihloko eziqhuba malunga neempawu zakho.
Idatha yexesha lokwenyani kunye nembali inokuchaphazeleka ukuqhuba amaphulo okuthengisa, ukukhusela ukuthembeka kwebrendi, kunye nodumo lwenkampani.
Abaphathi beemveliso kunye nabaphandi beemarike banokwandisa amaqela ekugxilwe kuwo anexabiso kunye nophando ngokujonga imithombo yeendaba kuphuhliso lwemveliso entsha kunye nokucwangciswa kwemveliso.
Ulawulo lunokuphumeza ngokufumana ukuqonda kunye nokudibana kunye nedatha yokusebenza kwentengiso enje ngengeniso, isabelo semali, inani lentengiselwano nokunye.
Nanku ukujonga okuhle kwi-IPO ye-Facebook kunye nevolumu yencoko kunye nemvakalelo ekhokelela kuyo:
Isishwankathelo seRadar ekuhlaleni
Sonwabe kakhulu ngethuba lokudibana neNetSuite. Ngokudibanisa ubunzulu, kwangoko kubahlalutyi ukusuka kwiRadiyo yoLuntu ngobutyebi bedatha kunye neenkonzo ezibanzi ngaphakathi kweqonga leSuiteAnalytics, sinokubonelela abasebenzisi beNetSuite ngengqondo kubahlalutyi ukusuka kubuninzi bemithombo yeendaba zentlalo. UJustin Graves, u-CEO we Ukungafezeki
utyelelo I-SuiteApp yeNetSuite ngolwazi oluthe kratya kwisisombululo esidibeneyo.
tags: ukuhlalutya incokonetsuiteusetyenziso lwe-netsuiteUhlalutyo lweemvakaleloradar yentlaloisutiapps
Kutheni umxholo we-SEO?
Ukukhula kweNtengiso yeFowuni
Meyi 28, 2012 kwi-5: 25 AM